Ikamelo Lomndeni e-Chapel Orleans-Chambord - I-Airbnb
Ikamelo Lomndeni e-Chapel Orleans-Chambord
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Christie
U-Christie Ungumbungazi ovelele
I-KING's Gue ESTATE
Ngesikhathi esithile, kwakuyi-Chapel yasendulo... elungele imindeni.
Isimo esilula nesangempela saleli kamelo elikhulu lomndeni elisophahleni, elithokomele kakhulu elinombala o-beige nombala ophinki, futhi elikhanya kakhulu ngefasitela layo langempela lengilazi elinamabala kanye nokubukeka kwengadi enkulu. Itholakala endaweni yokungena epaki enendawo yokungena ezimele.
Kuze kufike kubantu abangu-4, 5 uma ingane (kuhlanganisa izinsana).
Esitezi esiphansi sesonto, igumbi lokuphumula eligcinelwe izivakashi; ukudla okuconsisa amathe nesidlo sasekuseni esenziwe ekhaya kufakiwe.
Ngaphandle kwe-New Orleans ne-Chambord, i-Domaine du Gué du Roi iyindawo yenqaba encane yekhulu le-18, ngeshwa yanyamalala, esayithenga ngo-2011 futhi sayilungisa ngesineke ukuze siyenze ibe yindlu yenjabulo yomndeni wethu nababungazi. Epaki elingama-acre angu-2.5 elizungezwe izindonga zamakhulu eminyaka, sashintsha inqolobane nehobe saba izindlwana ezimbili nesonto laba amakamelo ezivakashi amabili, futhi safaka i-trailer yokhuni.
Ngesikhathi esifanayo, sabuyisela ipulazi elihlangene empilweni, i-La Ferme du Petit Gué du Roi, ngokwenza ipulazi lamahhashi nezimbongolo kumahektha amaningi.
Itholakala emzileni we-Chateaux de la Loire, ihora eliyi-1.5 eningizimu-ntshonalanga ye-Paris, enokufinyelela okuqondile emigwaqweni emikhulu ye-A10 ne-Azar, nasemaphethelweni emizileni yokuqwala izintaba eyinhloko, manje siyakujabulela ukwamukela zonke izivakashi ezifuna ikhefu elingavamile nelihlonipha indawo ezungezile, kanye nabagibeli be-European Route D'Artagnan, abagibeli bamabhayisekili be-Loire ngebhayisikili kanye nabahamba ngezinyawo e-Saint Jacques de Compostelle.
Kwake kwaba yi-Chapel yasendulo... enhle kakhulu emindenini.
Ngo-30 m2 esitezi sokuqala, amakamelo angu-3 ananyathiselwe ku-L: ingxenye yezingane imibhede engu-2 90, ingxenye yomzali umbhede omkhulu onendlu yokugezela yangasese (i-shower kanye nendlu yangasese). Amathuba ombhede owengeziwe wengane eyi-1 engaphansi kweminyaka engu-12. Ikhithi yosana enombhede wezinsana ogoqwayo. Amashidi, amathawula nensipho kuyatholakala.
Esitezi sokuqala sesonto, igumbi lokuphumula eligcinelwe izivakashi; isidlo sasekuseni sase-France sinikezwa kusuka ngo-8 ekuseni kuya ku-9.30 ekuseni: ama-croissant, izinkwa, ibhotela, amajamu enziwe ekhaya (okukhethekile: ama-strawberries nama-cherries), amasaladi ezithelo ezintsha, i-yogurt, ushizi, iziphuzo ezishisayo kanye nejusi yezithelo engenamkhawulo. Isihlalo esiphakeme sezingane.
Ukungena ngokuqondile epaki ngefenisha yengadi, izihlalo kanye nemidlalo yezingane etholakalayo.
I-Cléry Saint André iyidolobhana elitholakala kumakhilomitha angama-20 ukusuka e-Orleans elinamabhikawozi, i-charcuterie (imisebenzi eshunqayo ye-rillette), isuphamakethe kanye nendawo yokudlela ye-semi-gastronomic (La Villa des Bordes).
Kuphakathi kwegama elithi Orléans ne-Orléans Cléry iwayini.
Ukuvakashela i-Basilica yaseCléry Saint André (ithuna likaLouis XI) elithathwa njengesikhumbuzo somlando futhi elitholakala ngaphakathi komngcele weLoire Valley, iNdawo Yamagugu Omhlaba ye-UNESCO.
Aux portes d'Orléans et de Chambord, le Domaine du Gué du Roi est un vestige d'un petit château du XVIIIème siècle, malheureusement disparu, que nous avons acheté en 2011…
Sihlala esizeni futhi sizokujabulela ukukunikeza usizo nezeluleko kukho konke ukuhlala kwakho.
UChristie Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 50116781100055